Home » Environment » ပိုးသတ်ဆေးကိုစုပ်ယူထားသော အသီးအနှံများ
Foods health Health and Fitness
အခုပြောမယ့်အသီးအနှံတွေက ပိုးသတ်ဆေးကို စုပ်ယူထားပါတယ်။အဲဒီသီးနှံတွေကို ရေဘယ်လောက်ပဲဆေးဆေး၊ဆားရေပဲစိမ်စိမ်၊ဘယ်လောက်ပဲချက်ပြုတ်ချက်ပြုတ် အဲဒီအသီးတွေထဲက ပိုးသတ်ဆေးတွေ ကပြန်မထွက်နိုင်ပါဘူး။အဲဒီအသီးတွေကို ကမာ္ဘ့ကျန်းမာရေးဌာနကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲဒီအသီးတွေကတော့
မက်မန်းသီးကို ပိုးသတ်ဆေးတစ်ခါဖြန်းထားရင် အဲဒီပိုးသတ်ဆေးတွေအကုန်လုံးကို မက်မန်းသီးက စုပ်ယူထားပါတယ်။အဲဒီမက်မန်းသီးကို ဘယ်လောက်ဆေးဆေးပိုးသတ်ဆေးတွေ မလျော့သွားပါဘူး။ဒီကြားထဲ မက်မန်းသီးကို အရောင်လှအောင်ဆိုးဆေးအနီတွေဆိုးလိုက်သေးတယ်. ..
ဒီထဲမှာ ပန်းသီးက ဒုတိယနေရာမှာပါတဲ့အတွက်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆို ပန်းသီးကိုတစ်နေ့တစ်လုံးစားရင် ဆရာဝန်တောင်မလိုဘူးလို့ ဆိုရိုးရှိပါတယ်။ပန်းသီးဟာ ရောဂါတော်တော်များများအတွက် ကောင်းစေပါတယ်။ဒီလိုပန်းသီးကို ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းထားပြီး ကျွန်တော်တို့ကလဲတစ်နေ့တစ်လုံးသာမှန်မှန်စားမယ်ဆိုရင်. . . .
ငရုတ်ပွ အနီရောင်တွေ၊အစိမ်းရောင်တွေ၊အဝါရောင်လဲပါတာပေါ့ဗျာ ပိုးသတ်ဆေးတစ်ခါဖြန်းမိလို့ကတော့ မတွေးဝံ့စရာ. . . . .
တရုတ်နံနံတွေထဲမှာလဲ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပိုးသတ်ဆေးတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
စတော်ဘယ်ရီသီးတွေကို ကလေးတွေတော်တော်များများက ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။စတော်ဘယ်ရီမှာ ပိုးသတ်ဆေးတွေပါဝင်နေရုံမက ဆိုးဆေးအနီတွေလဲဆိုးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်. . .
(၁၃)ခရမ်းချဉ်သီး ၅၀% ကျော်
ဒါကတော့အတွေ့ရအများဆုံးအသီးအနှံတွေပါ။တစ်ခြားသီးနှံတွေလဲရှိပါဦးမယ်။အဲဒီတော့ ဒီသီးနှံတွေကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။မရှောင်ကြဉ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တောင် လျော့စားသင့်နေပါပြီ။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တိုကဘာတွေစားမလဲ???Organic သီးနှံတွေ၊အခုအခါ ခေတ်စားနေပါပြီ။အဲဒီ Organic သီးနှံတွေကကျန်းမာရေးနှင့်ညီတဲ့အပြင် ဓါတ်မြေဩဇာတွေပိုးသတ်ဆေးတွေ မပါဝင်တဲ့အပြင် သဘာဝအဟာရတွေပါဝင်တဲ့အတွက် အခုအခါ နိုင်ငံတော်တော်များများက Organic ဘက်ကိုဦးတည်လာကြပါပြီ။
Organic သီးနှံတွေစားရင်ဘာတွေရမလဲ၊ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရေ Organic စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံတွေ ရှိနေပြီလားဆိုတာကို အလျဉ်းသင့်သလိုဖော်ပြပေးပါမည်
အူးမြောက်မြောက် - ( Book.E) says:
ဝယ်စားဖို့ တော်တော် စဉ်းစားရမယ် ဖြစ်နေပါရော
လောဘ သားတွေ ကြောက်ဖို့ အတော်ကောင်း
ငင့် …ဘာသီး စားရပါတော့မလဲ….
အသီးအနှံတစ်ခုဟာ သိပ်လှပြီး သိပ်အပြစ်ကင်းနေပြီဆိုရင်…
သိပ်ကို စားချင်စဖွယ် အရောင်အဆင်းနဲ့ ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်.. အဲဒီအသီးအနှံမှာ ပိုးသတ်ဆေးတွေ
ဆရာမဂျူး ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတာလေး…
.တကယ်တော့ ဗမာပြည်သူားတွေဟာ..အဆိပ်ကိုနဲနဲချင်းစားလာခဲ့လို့ အဆိပ်ပီးနေလောက်ပြီဗျ :))
အဲဒါကြောင့် သများက အသီးအရွက် သစ်သီးမစားပဲ
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အသားစားလို့ရအောင် အမဲပစ်ထွက်မလားဆိုတော့လည်း တော တွေ က မရှိတော့။
ရည်ရွယ်ထားတာတော့ နောက်ငါးနှစ်အတွင်း ကိုယ့်ခြံလေးနဲ့ပဲ တတ်နိုင်သမျှ စိုက်စားမယ်လို့